🥇 ▷ Samsung ayaa bilaabi doonta Samsung Galaxy Fold bisha Sebtember 27 ✅
Samsung ayaa bilaabi doonta Samsung Galaxy Fold bisha Sebtember 27
Dad badan ayaa welwel ka qabay soo saarista taleefanka cusub ee Samsung, kaas oo ah Samsung Galaxy Fold. Shirkadda ayaa dib u dhigtay soo-dejinteeda hal mar laga bilaabo taariikhda la qorsheeyay ee Abriil. Dhawaan, Samsung ayaa ku dhawaaqday in taleefanka casriga ah ee loo yaqaan “Galaxy Fold” uu bilaabi doono 27-ka bisha Sebtember gudaha Mareykanka. Cutubyada loo qorsheeyay bilawga Abriil waxay leeyihiin arrimo la xiriira muuqaalkooda, sidaa darteedna waa inay shirkadda dib u dhigto bilaabista. Samsung waxay ka shaqeyneysay shaashadaha shaashadda waxayna wanaajisay naqshadeeda waxayna hadda diyaar u tahay inay taleefanka u soo bandhigto dadweynaha.
Samsung Galaxy laab Sida magaceedu sheegayo waa taleefanka gacanta oo laalaabanayo oo leh dhuujin si loo ilaaliyo shaashadda iyo shaashadda. Waxay soo bandhigi doontaa muuqaal dabacsan oo aan xadidneyn oo ay weheliso waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin shaashad buluug ah oo shaashad ah iyo shaashad u habeysa raaxada indhaha. Cadaadiska indhaha ee sababaha feeraha khatarta leh waa la yareyn doonaa iyadoo la raacayo filterka iftiinka buluugga ah. Bandhigu wuxuu u rogi doonaa shaashadda AMOLED oo leh khariidaynta midabaynta HDR 10+. Tani waxay soo saari doontaa khariidad cod oo aad u wanaagsan oo firfircoon. Sawirada waxaa la rajeynayaa inay noqdaan kuwo aad u wanaagsan oo cad oo ku saabsan tikniyoolajiyadan.
Samsung waxay sameysay dhowr horumarin ah qaabeynteeda kadib markii ay dib u dhigtay bilaabashadeeda bishii Abriil. Xirmooyinka laabatooyinku waxay leeyihiin dabool isku xidhan si loo ilaaliyo shaashadda isku laabma. Waxay u muuqataa in bir badan lagu daray taleefanka si loo ilaaliyo shaashadda iyo muujinta. Kadib hagaajintan oo dhan, taleefanka gacantu wuxuu ugu dambeyntii diyaar u yahay in lagu sii daayo suuqa. Waxaa la filayaa in lagu siidaayo qiimo dhan $ 1,980. T-Mobile, oo guud ahaanba xiriir la leh shirkadaha badankood ee casriga, ma iibin doonaan qaabkan. Taleefannada mobilada ayaa laga heli doonaa dhammaan suuqyada Samsung iyo sidoo kale dukaanada ‘Buy Buy’ oo nooc cusub ah oo aan furneyn.
Dadka raba inay ka iibsadaan taleefanka casriga ee AT&T bakhaar uma baahna inay walwalaan maxaa yeelay taleefankani sidoo kale waa laga heli karaa markan iibka. Telefoonkan casriga ah waxaa lagu qalabeeyay laba dhegaha Galaxy Aramid fiiber dhegaha, xargaha xargaha iyo qalabka wax lagu hagaajin karo. Fudud Khaas ah Qunsulka ayaa sidoo kale abaabuli doona inuu ka caawiyo macaamiisha cusub inay ku beddelaan macluumaadka telefishanka gaboobay taleefanno cusub. Tan waxaa lagu dhisidoonaa xirmada adeegga cusub ee Samsung Galaxy Fold Premier Premier, oo loo heli doono dhammaan macaamiisha iibsatay Samsung Galaxy Fold.